Ny tontolon' IkalaFanja: Hanao fitoerana KOJAKOJA
Publié par Ikala Fanja à 13:11
maylis rambelo 11 novembre 2014 à 03:26
Cc Fanja , tena mahafinaritra ny maso e , misaotra amin'ny toro hevitra madama a !sady tsy maha be korontana ..
aina vicky 11 novembre 2014 à 06:01
tsy misy isaorana akory ô, ny hazo any bdb sady ny vatokely dakain'ny ... olombelona... lasa izao, manaova :)
Aina Effler 11 novembre 2014 à 03:43
Tsara be ery akia �� et belle collection de bracelets koa an!!
aina vicky 11 novembre 2014 à 06:03
nitombo isa be izy tato dia tsy antonona an'ilay cadeau d'anniversaire intsony koa angaha tsy nanita-kevitra ho azy ny farany
Olivia Razafinjatoniary 11 novembre 2014 à 06:51
Tsara be. Tena nanome hevitra ahy ity iray ity. Sady manana ilay vato kely mitovy loko sy habe amin'ny kanety ireny aho fa somary fisaka fotsiny. Andramako asiana fasika dia handramako atao amin'izao, dia izay tsara no tazoniko. Tsy ratsy koa ilay hevitra ratsa-kazo an! Halaiko sary raha tsara e ;)
aina vicky 11 novembre 2014 à 12:41
zavatra iainantsika andavan'andro io anie fa tsy azo an-tsaina fotsiny e, mahafinaritra mifampizara @zay mba tsy mandany vola foana sady mba tsy be gaspillage isika no milamindamina foana mahafatifaty ny trano ;)
faralalaina lai 20 février 2015 à 06:03
Hahaha, misaotra nanome hevitra e! hoavy aho amin'ny andagy sy ny harona! hiketriketrika ny loha aloha ho créative kely... misaotra t@ inspiration :*
aina vicky 25 février 2015 à 12:41
Miandry ary aho! Atokisako mihitsy ndry 😘